Thina OK: Konke Esikwaziyo Kuze kube manje - Ukudlala
Thina OK: Konke Esikwaziyo Kuze kube manje
Ikhishwa nini i-We Are OFK?
Ingabe ikhona i-trailer ye-We Are OFK?
Unjani umdlalo wegeyimu ku-We Are OFK?
I-Ofk, umdlalo osebenzisanayo oxoxa ngemvelaphi yeqembu le-indie le-indie le-OFK, libonakala liyigugu elilandelayo elizophuma emlotheni wenkundla ye-Valve's Steam. Ihambisana nezithombe ezinyakazayo nezigqi ezibushelelezi, uhambo olupholile luthwebula okuhlangenwe nakho kweqembu labangane abaseminyakeni yawo-20 njengoba lizama ukuthola uthando, ukukhokha imali yokuqasha, nokubambela indawo endaweni yomculo wase-Los Angeles, phakathi kwezinye izinto. Ifilimu yopopayi ethi We Are OFK inamaphimbo ahlukene, okuhlanganisa no-Ally Maki (kusukela ku-Toy Story 4 kanye ne-Dear White People, kanye ne-Squid Game, i-squid Game, no-Deedee Magno Hall (uPearl wochungechunge olupopayo u-Steven Universe, phakathi kwabanye. ).
Esinye sezici ezikhanga kakhulu ze-We Are OFK kungase kube ukuhlukahluka kwabalingisi abavela kufilimu. Lokhu kungaphezu kwesiqondiso sobuciko. Ukuthi ngiwumlingisi oyinhloko womdlalo wevidiyo kungenza i-Teen Me ijabule kakhulu. KANYE nesitabane ikakhulukazi kulowo u-Itsumi Saito, oyilungu lebhendi ye-OFK, eshiwo kubhulogi ye-PlayStation. Noma ubani oke wathwala kanzima ukuze aziphilise ngobuciko bakhe noma agqekeze emkhakheni lapho izingqinamba bezinqwabelene khona kufanele akwazi ukuhlobana nengqikithi yendaba. Gqoka ama-headphone akho futhi ulungiselele ukuhanjiswa emhlabeni wedijithali wothando, umculo, nokuthumela imiyalezo? Siyayiqonda injabulo yakho. Kuze kube manje, abathuthukisi baveze ulwazi olulandelayo mayelana nokuthi We Are OFK.
Funda futhi: UNkulunkulu Wezempi: I-Ragnarok Ngeke Ibambezeleke ku-2023
Ama-Game Awards walo nyaka amakwe okokuqala ngqa lapho kusakazwa khona i-We Are OFK, neqembu elidumile le-indie pop elicula ingoma yalo yokuqala ethi, Landela/Ungalandeli. Ithimba le-OFK limemezele izinhlelo zokukhulula igeyimu yomculo we-biopic kanye ne-EP esebenzisanayo ngesikhathi esithile ngo-2022, okuhambisana nomfutho wonyaka odlule ukuya onyakeni olandelayo. Abadlali bamageyimu bazokwazi ukuthenga uchungechunge lwe-Making-of-the-Band lwe-PC yabo, i-PlayStation 4, noma i-PlayStation 5. Uxolo, abasebenzisi be-Xbox, kodwa kubonakala sengathi le indie yamaphupho izotholakala kuphela kukhonsoli ye-PlayStation.
I-OFK yamemezela kuTwitter ngo-Okthoba ukuthi isisungule ubudlelwano nelebuli yokuqopha iSony Music Soundtracks ukuze iphile i-EP yayo. Kuyenzeka ukuthi ufake okuthi Landela/Ungalandeli ekuphindeni kuze kube yilapho umdlalo kanye nesethi ephelele yamathrekhi kukhishwa uma ungakwazi ukulinda. Njengoba kunemidlalo engaphezu kuka-350,000 ku-Spotify, ingoma isivele inabalandeli abaningi, i-OFK inabalaleli benyanga abayizi-9,762 ngesikhathi sokubhala. Njengamanje si-OFK iyatholakala kuSteam njengento yohlu lwezifiso.
Funda futhi: Pragmata: Yini Esiyaziyo Kuze kube manje
Ukusebenza kwe-Landela/Yeka ukulandela kwethimba le-OFK kuma-Game Awards kulandelwe ukukhishwa kwama-trailer amabili egeyimu ethi We Are OFK. I-trailer yokuqala, eyakhishwa ngo-E3 2021 futhi isinika amazwibela ekulandiseni komdlalo, isiyatholakala manje. Esiqeshini sesibili, esikhishwe phakathi neSimo sokudlala sika-Okthoba, ikhemistri yabalingisi abayinhloko nokusebenzisana kuboniswa ngokuningiliziwe.
I-Story Reveal Trailer, enemizuzu engaphezudlwana nje kobude, yethula abalingisi abakhulu: u-Itsumi, uLuca, uCarter, noJey. Ufana neplanethi iSaturn ngoba ukude futhi uCarter ufana nenkanyezi yokudubula ngoba banamajezi amade futhi benza izifiso. ngokusho kuka-Itsumi. Njengoba uLuca engeza ukuthinta kokuqeda esithombeni, uJey uchazwa ngokuthi uyesabeka, kodwa ngendlela eshisayo, futhi uhlakaniphile, kodwa ezindlebeni zakho. Ngaphezu kwalokho, ividiyo inikeza amazwibela kafushane okudlalwa kwegeyimu kwegeyimu, okuhlanganisa izindawo ezimbalwa ezinombala we-pastel, izingxoxo zombhalo, nezinketho zezingxoxo ezihlukahlukene.
I-State of Play Trailer ihlinzeka ngokubheka okujulile ngobuntu bamalungu ebhendi. U-Luca ubonakala eyisiwula futhi enomoya okhululekile, kanti u-Jey ubonakala egxile kakhulu futhi eqinile. U-Itsumi wenza izinto, naphezu kweqiniso lokuthi ubonakala engaqiniseki ngaye. Idwala eqenjini, uCarter ubonakala egcina izinto ziqinile futhi eboleka usizo lapho kudingeka. Akungabazeki ukuthi Ithimba le-OFK lizokhipha amavidiyo engeziwe nokuqukethwe ezinyangeni ezingaphambi kokwethulwa kwe-We Are OFK.
Funda futhi: I-Biomutant: Esikwaziyo Kuze kube manje
I-We Are OFK iwumkhiqizo we-multimedia oxoxa indaba yokwakheka kwe-OFK ngeziqephu ezinhlanu ezisebenzisanayo, ezipopayi namavidiyo omculo amahlanu asebenzisanayo. E-Los Angeles, isenzo siqala lapho u-Itsumi Saito eqeda ubuhlobo bakhe bothando futhi ethutha edolobheni ukuze aphishekele izifiso zakhe zomculo. Indaba ibekwe osukwini lwanamuhla. Emcimbini waseHollywood, uhlangana nomdidiyeli womculo isihlabani sakhe esidlondlobalayo, okumnika ikhefu alidingayo ukuze ekugcineni afeze isifiso sakhe sokuba ngumculi oqophayo.
Ezikhathini eziningi ezindabeni zegeyimu yevidiyo, umuntu omelene naye udrako, i-swordsman, noma inkampani eyonakele. Akulona uhlobo lwendaba esijabulela ukuyifunda U-Saito wangempela, owavezwa kubhulogi ye-PlayStation, wembulwa. Ku-‘Thina KAHLE,’ isigebengu sithi … imizabalazo obhekene nayo uzama ukudala okuthile: i-imposter syndrome, usizi, ukungakwazi ukuxhumana kahle, abantu abanamaphupho ahlukene nezinto eziza kuqala.
Abalingiswa benziwe baphila ithimba le-OFK, elibanike inkhulumomphendvulwano enezwi eligcwele.
Phakathi kwezici ezibalulekile ze-Hyper Light Drifter, ngokusho komqondisi wezobuciko u-Teddy Dief, owaziwa kakhulu ngomsebenzi wabo wokuthumela imiyalezo ethinta inhliziyo, ukoma, ukuthumela imiyalezo nge-emoji kukhona. phakathi kwezinye izinto. Kodwa-ke, akucaci ukuthi imuphi umthelela, uma ukhona, izinqumo zakho ezizoba nawo endleleni indaba eyenzeka ngayo ngoba lesi sihloko sibonakala siwela ngokuphelele esigabeni sokuzijabulisa okusebenzisanayo.
I-Xbox PC Game Pass Iza Ngokusemthethweni EMalaysia!